Afaka Miara-misy Amin’ny Aterineto Misokatra Ve Ny Fahalalana Indizeny Nentim-paharazana? · Global Voices teny Malagasy
Afaka Miara-misy Amin'ny Aterineto Misokatra Ve Ny Fahalalana Indizeny Nentim-paharazana?
Voadika ny 10 Marsa 2018 6:30 GMT
Ny hetsika open web (habaka misokatra) dia mampiroborobo ny hevitra hoe misy ny olona afaka mandray anjara sy mampivelatra fahalalana izay ampiasaina ary zarain'ny fiarahamonina manerantany. Inona no mitranga rehefa miditra amin'ity maodely ity ireo vazimba teratany nentim-paharazana? Azo ampidirina anaty fiarahamonina izay ahafahan'ny rehetra mandray anjara tokoa ve ny eritreritra, ny fiteny, ny fomba amam-panao, sy ny hevitra miori-paka amin'ny sehatra, tantara sy kolontsaina iray manokana? Azo jerena ato ny vaovao momba ireo mpandray fitenenana sy mpandrindra tamin'ity fivoriana ity .
Nanokatra ny tapatapak'ahitra tamin'ny tantaran'ny zazalahy iray kamboty tamin'ny fahazazany izay nahita boatinà horonam-peo misy hira sy tantara nentim-paharazana tamin'ny fahatanoran'ny rainy izay efa noraketin'ny mpikaroka efa ela ny mpandrindra Eddie Avila, talen'ny Rising Voices ao amin'ny Global Voices .
Nihevitra ilay tovolahy fa mety ho tsara ny mampiditra ilay horonam-peo anaty aterineto sy mizara azy an-tserasera, fa tsy faly tamin'izany ireo mpiray tampo aminy. Niteraka fanontaniana momba izay tompony ity tantara fohy ity. Ilay zanaka lahy nahita ilay horonam-peo, sa ny iray tampo aminy, ny rainy efa maty, ny fiarahamonina na ny mpikaroka ve no tompon'ny votoaty?
Mitady ny faneken'ny vondrom-piarahamonin'ireo tompotany mba hilazana ny tantarany an-tserasera
Manome fahafahana ho an'ny olona mba hanangona sy handrakitra zavatra manan-danja miaraka amin'ny fahafahana hizara izany amin'ny aterineto ny fandrosoana ara-teknolojia. Ny olana manjavozavo dia ny hoe mila mieritreritra mitady fankatoavana ve ireo mpiserasera sa tsia rehefa mizara votoaty indizeny (tompotany) ao amin'ny aterineto misokatra.
Miara-miasa amin'ireo vondrom-piarahamonina tompotany samihafa i Nick Lunch ao amin'ny InsightShare ary mino fa “manan-danja kokoa noho ny vokatra ny dingana.”
Nanasa an'i Lunch mba hiasa amin'ny tetikasa lahatsary fanadihadiana maharitra ifarimbonana ireo zokiolona ao amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany. Manampy ireo vondrom-piarahamonina hamaha ny olana sy hitady vahaolana ity dingana ity mba hitondra fanovana ara-tsosialy.
Rehefa mieritreritra momba ny fandraketana ny tenindrazana, manontany ilay mpikatroka aterineto misokatra, Subhashish Panigrahi hoe:
Manao ahoana ny faharefon'ny vondrom-piarahamonina rehefa mametraka votoaty avy amin'izany vondrom-piarahamonina izany ho hita amin'ny aterineto ianao?
Nampiany koa fa matetika araraotina ny tompotany rehefa mampiditra votoaty indizeny ao amin'ny aterineto misokatra izay tantanin'ny orinasa goavana amin'ny ankapobeny, ankoatra ireo mpikaroka izay mikasa hampandray anjara ny fiarahamonina.
Indraindray sarotra ny mahazo fankatoavana satria mety tsy mahalala momba ny aterineto misokatra ny olona indizeny ary nampiasa ny renibeny ho ohatra. Nanandrana nampianatra azy momba izany i Panigrahi ary nangataka raha afaka mizara ny iray amin'ireo tantarany manokana momba ny fitsaboana nentim-paharazana izy saingy nolaviny satria tsy afaka mahazo izany fampahalalana izany tsotra izao fotsiny ny olona iray, fa tsy maintsy ahazoana vola izany.
Mitandrema amin'ny fizarana fahalalana nentim-paharazana amin'ny ‘vahiny’
Vondrom-piarahamonina indizeny maro no mitandrina amin'ny fizarana fahalalana nentim-paharazana amin'ny vahoaka marobe. Amin'ny toe-javatra sasany, misokatra amin'ny fizarana ireo zokiolona, saingy amin'ny fotoana hafa, manara-maso tsara ny zavatra ambarany izy ireo.
Mpikatroka nomerika, Simona Mayo, niresaka momba ny fomba nahatongavan'i Raul Ruiz, talen'ny sinematografia, tany Shily nandritra ny fitondrana jadona mba haka lahatsary fanadihadiana. Tamin'ny horonantsary iray manokana, nifantoka tamin'ny vahoaka zokiolona Mapuche sy ny vondrom-piarahamoniny izy, manontany azy ireo ny heviny momba ny governemanta.
Ny olana dia samy tsy mahafantatra ny vahoaka Mapuche na izy na ny mpaka sary satria tsy nanana anarana izy ireo. Nilaza mpahay tantara Shiliana iray ihany koa i Mayo izay tsikaritr'i Mayo ho “mpandainga”.
Naka fahalalana be dia be momba ny fiteny Mapuche izy ary nanomboka namoaka azy ireo tahaka ny hoe avy aminy izany. Tsy mpandahateny izy, tsy olon-kendry izy, fa mpampianatra fotsiny.
Nitaraina ny fomba nandehanan'ity mpahay tantara ity manerana izao tontolo izao sy ny nanaovany fombafomba sy fanambadiana Mapuche i Mayo, saingy “tsy mankalaza mariazy izahay”, hoy i Mayo.
Ohatra iray amin'izay mety hitranga izany rehefa mamela ny vahiny hiditra ao anaty vala ny vondrona indizeny. Misy ny ahiahy lehibe fa mety mampiasa ny fahalalahana azony avy amin'ny vondrom-piarahamonina tsy araka ny tokony ho izy izy ireo, ka matetika miteraka faharavam-pitokisana izany.
Raha te-hanaraka an'io hevitra io, nizara fomba fiteny mivantana avy amin'ny mpanandro indizeny avy any Ekoadaoro izay misafidy an-kitsipo ny tsy hiseho antserasera i Lunch:
Tsy afaka mampiato ny teknolojia isika, mila mampiasa azy io isika, saingy tsy maintsy mampiditra izany amim-pitandremana lehibe. Tsy maintsy lohalaharana ny fanabeazana. Tokony ho madio ny fampahalalana rehefa zaraina, raha tsy izany dia miely toy ny viriosy.